Mailflow: Ku dar Autoresponders iyo otomaatiga isku xigxiga Emailka | Martech Zone
Mid ka mid ah shirkadaha waxay laheyd barxad ay ku haynta macaamiisha si toos ah ugu xirnaayeen isticmaalkooda barxada. Si fudud haddii loo dhigo, macaamiisha isticmaashay waxay heleen guul weyn. Macaamiishii halganka ka baxday. Taasi maahan wax ku cusub wax soo saar ama adeeg kasta.
Natiija ahaan, waxaan soo saarnay taxane emayllo ah oo labadaba wax baray oo ku dhibay macaamiisha si ay u bilaabaan isticmaalka barxadda. Waxaan u soo bandhignay sida loo duubo fiidiyowyada iyo sidoo kale fikrado dhowr ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo. Waxaan isla markiiba aragnay kororka isticmaalka, taas oo horseeday natiijooyin, taas oo aakhirkii horseeday sii-haynta macmiilka. Waxaan iskumidaynay taxanaha 'autoresponder' sida ugu dhakhsaha badan madal macmiilku udiyaar garoobay oo ay tababaro dhameeyeen
Sababtoo ah emayllada ayaa otomaatig ah, kharash yar ayaa ku baxay horumarinta barnaamijka. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo inta aan dooneyno inaan ku bixino nasiib waqti horumarineed, is-dhexgalka iyo otomaatigga kiciyay qulqulka emaylka waa in lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo barxad weyn.
Qulqulka boostada waa madal si gaar ah loogu dhisay isticmaalaha ugu dambeeya inuu jiido oo hoos u dhigo taxanaha iimaylka ee shaqooyinka.
Astaamaha Mailflow-ka Ku dar
qalabaynta - U dhis taxane sida ubaxyo wicitaanno ah oo aad waxyar uun garaacdo. Khariidad ahaan ololaha oo dhan muuqaal ahaan.
Bartilmaameedsiga - Jooji ka fikirida qaybaha oo bilow inaad ka fikirto shaqsiyaadka si fariintaadu runti u noqoto mid shaqsiyeed.
waqtiga - U dir ololeyaashaada marka dadka wax helaya ay yihiin kuwa ugu jawaabcelinta badan, ka baxsan waqtiga maalinta oo ku saleysan habdhaqanka dhabta ah.
WordPress - Ku xir boggaaga WordPress ilbiriqsiyo si aad u abuurto foomam qaas ah una calaamadee isticmaaleyaasha ku saleysan ficilada goobta.
Analytics - Ha sugin illaa ay ka dhammaato - dhab ahaan u arag waxa u shaqeynaya sida ay wax u dhacayaan oo ku hagaaji ololahaaga duulimaadka.
Isdhexgalka - A buuxa API iyo taageerada dhismaha isdhexgalka caadooyinka. Dheeraad ah in ka badan 400 isku dhafan oo suurtagal ah iyada oo loo marayo Zapier.
Astaamaha diraha - Maaree macaamiil badan, ololeyaal iyo dirayaal dhammaantood ka wada koonto akoon iyo isweydaarsi kulul ololeyaasha dhexdooda.
Tagitaanka - Baro wax badan oo ku saabsan shakhsiyaadka ku dhex jira dhagaystayaashaada iyada oo ku saleysan ficilada ay ku qaadaan ololayaasha iyo khadka tooska ah.
Waqtiyada - U dejiso aagag heer maxalli ah, sidaa darteed waxaad si toos ah ugu diri kartaa olole kasta waqtiga saxda ah ee maalinta.
API buuxa - Mailflow waxaa laga dhisay ka API kor Adeegga oo dhan wuxuu ka socdaa annaga API taadana way awoodaa.
Tags: ololeyaal faleebofalanqaynta emaylkaemayl apiotomatiga emaylkaemaylka loogu talagalay wordpressisku-darka emaylkawarbixinta emaylkaisku xigxiga emaylkabartilmaameedka emaylkawaqtiga emailkaemaylka shaqadasocodsiinta boostadasuuq-geynta suuqaastaamaha dirahawaqtigaWordPressemaylka qoraalkazapier